avylavitra · Mey 2011 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Mey, 2011
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Mey, 2011
Eoropa Andrefana 30 Mey 2011
Amerika Latina 24 Mey 2011
Bolgaria: Fifandonan'ny Vondrona Avy Amin'ny Elatra Havanana sy Silamo Tao Sofia
Eoropa Afovoany & Atsinanana 21 Mey 2011
Ruslan Trad mitatitra fa fifandonana mahery vaika no nisy teo amin'ireo mpomba ny antoko nasionalista Ataka (Fanafihana) sy ny Silamo tao an-toerana tao amin'ny maosken'i Bania Basha tao Sofia renivohitr'i Bolgaria, nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ireo nasionalista manohitra ny fanamafisam-peo avy amin'ilay maoske.
Costa Rica: Andro Hanoherana Ny Tsy Fankasitrahana Ireo Olona Mitovy Nefa Mifanambady
Amerika Latina 19 Mey 2011
Nankalaza ny andro tsy fankasitrahana ireo olona mitovy nefa mifanambady ny 17 May teo, ary na teo anivon'ny aterineto nataty ivelany dia samy nankalaza ny fahasamihafana ara-pananahan'ny olona.
Oganda: Nolokoin'ny Polisy Mavokely Ireo Mpanao Hetsi-panoherana
Afrika Mainty 17 Mey 2011
Nanao valin-kafatra ho an'ireo hetsi-panoherana Walk to Work nisy tato anatin'ny roa volana farany ny polisy Ogande, tamin'ny entona mndatsa-dranomaso sy tifitra tamin'ny bala tena izy. Nandritra ny hetsika iray natao tamin'ny Talata lasa teo, fomba hafa indray no nampiharin-dry zareo, tifitra rano miloko mavokely mankany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nikasa ny handeha ho an'ny an-kianjan'ny Lalampanorenana ao afovoan'i Kampala.
Filipina: Gadra Politika Manoratra Diary Avy Any Am-Ponja ao Anaty Aterineto
Azia Atsinanana 17 Mey 2011
Nanangana bilaogy iray handraketana ny fiainany any am-ponja sy ny eritreriny ny mpanakanto Filipiana iray, mpanao gazety sy mafàna fo izay notazonin'ireo manampahefana ao Philippines am-ponja. Ny fianakaviany, ny namany, ireo mpanakanto mpiara-miasa aminy sy mpanoratra avy amin'ny fiarahamonina sivily koa dia nampiasa ny vohikala ho fanentanana ny amin'ny hamotsorana azy.